Pineau des Charentes: zandrin'i Cognac - tonga mena sy fotsy
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Pineau des Charentes: zandrin'i Cognac - tonga mena sy fotsy
Charente dia any South West France izay ny tantarany dia nanomboka tamin'ny andron'ny Romanina, ary ambany ny toetrany ankehitriny, afa-tsy ny tranon'ny Cognac.
Aiza i Charente
Charente dia departemanta kely any South West France, adiny 1 eo ho eo avaratry Bordeaux ary adiny 1 miala ny morontsirak'i Atlantika. Na dia hatramin'ny andron'ny Romana aza ny tantarany dia ambany ny mombamomba azy ankehitriny, afa-tsy ny tranon'i Cognac.
Azo inoana fa ny aperitifa frantsay dia ampahany amin'ny programa divay anao. Ny aperitifa frantsay malaza indrindra dia i Lillet (tsy maty natao tao amin'ny Casino Royale an'i Ian Fleming ary antsoina hoe Vesper), Kir sy Kir Royale (divay fotsy sy crème de Cassis mifangaro amin'ny Champagne) no natolotra tamina sodina kely; Byrrh (divay mena misy kininina - nanomboka tamin'ny 1866), Suze (fanadiovana ny fakany zavamaniry gentian - nanomboka ny taona 1885) sy Dubonnet (divay fotsy maina nampidirina zava-maniry; ny mena kosa dia malaza ho mamy, masiaka ary mifangaro quine - nanomboka tamin'ny 1846).
Ny fanadinoana dia mety ho lasa plus
Ampidiro i Pineau des Charentes, ankafizinao taloha izay miverina. Ity aperitifa frantsay rezionaly avy any Charent, Charente-Maritime ary Dordogne (France Andrefana) ity dia malaza any France nefa dia heverina ho zazavavikely any an-toeran-tany. Amin'ny maha-divay voaro mafy azy (mistelle na vin de liqueur) dia ampitomboina amin'ny fampidirana ranom-boaloboka vaovao tsy misy masirasira na fifangaroan'ny voaloboka masirasira kely, izay ampiana Cognac eau-de-vie ary matotra.
Ny legiona dia nanondro fa niditra tao amin'ny sehatra frantsay i Pineau des Charentes tamin'ny 1589 (andron'i Henry IV) rehefa nanisy voaloboka divay tsy nahy tao amina barika noheveriny fa foana fa tena misy eau de vie. Naverina tao amin'ny fitahirizan-javatra ilay fangaro mba hamboarina. Taona maro taty aoriana, nosokafana ny barika, ary ny atiny namokatra zava-pisotro mifandraika ankehitriny amin'ny faritra Charente.
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20, Emile Daud, mpanao divay avy any Burie (Charente-Maritime) dia hendry tamin'ny fanaovana varotra ilay zava-pisotro. Tamin'ny 1935, Pineau des Charentes dia nahazo ny toetoetran'ny Appellation d'Origine (AO) ho divay voaro mafy ary 10 taona taty aoriana dia nahazo ny marika frantsay AOC sy ny marika Eoropeana PDO (Protected Designation of Origin).